XOG: Puntland & Jubbaland ma soo diri doonan xubnaha u matalaya Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal ee magacaaban?
November 17, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 2
MUQDISHO(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes wuxuu helay macluumaad muujinaya suuragalnimada in ay Puntland & Jubbaland qeyb ka noqdaan howlaha guddiga Doorashooyinka Heer Federaal ee Khamiista soo socota loo bilaabayo tababarada la xariira arrimaha doorashooyinka, guddigan oo ay diidmo xoogan ka muujinayaan inta badan musharaxiinta u taagan Madaxweyne-nimada Soomaaliya.
Puntland waxay afar xubnood ku darsatay guddiga Heer Federaal ee doorashada iyo kan Xalinta Khilaafaadka, xubnahan oo iskugu jira Agaasime kuxigeenka Madaxtooyada, Lataliye sare oo katirsan 9ka xubnood ee latalinta Madaxweyne Deni & Labo kamid ah xubnaha Urur siyaasadeedka KAAH, ayaa la rumeysan yahay in aysan waqtigan ka qeyb noqon doonin kulamada Muqdisho.
Xogta ay heshay PuntlandTimes, waxay cadeynayaan in xubnahan aysan u safreynin Muqdisho, kana qeybgali doonin kulamada u horeeya ee guddiyadan, xili ay jiraan dhambaalo soo gaaray Puntland oo looga codsanayo in ay xubnaheeda u soo dirto guddiyada doorashooyina kulankooda.
Jubbaland ayaa wararku sheegayaan in ay dib u dhigtay in xubnaheeda magacaaban ay qeyb ka noqdaan kulamada guddiga inta uu socdo muranka u dhaxeeya siyaasiinta mucaaradka iyo Dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Labada maamul ayaa muujinaya walaaca ay ka qabi karaan guddiga ay xubnaha kusoo darsadeen markii koowaad, waxaana ay diidan yihiin in ay ka hadlaan xubnaha la magacaabay,maadaama laftirkoodu ay soo xusheen xubnaha ugu dhaw ee ah shaqaale dawladeed, ayna ka war sugayaan Mucaaradka sida ay uga falceliyaan arrimahan.
Kooramka ay guddiga doorashada ee la xareynayo Khamiista ku dooran karaan Gudoomiyaha & Gudoomiye kuxigeenada labada guddi ayaa buuxa sida ay cadeynayaan xogaha la helayo, waxaana Guddiga Doorashadu uu ku furmayaa 21 xubnood oo kooram ku buuxo, kuna dooran karaan masuuliyiinta ay rabaan, iyadoo ay labada maamul-ba maqan yihiin.
Guddiga Xalinta Khilaafaadka ayaa isna kooramkiisu noqonayaa 17 xubnood, taas oo iyana ay dooran karaan Gudoomiyaha & Gudoomiye kuxigeenka, iyadoo ay maqan yihiin 8 xubnood ee Jubbaland & Puntland.
Madaxda Jubbaland & Puntland ayaa tan iyo markii la dhameystiray hanaanka heshiiska doorashooyinka 2021-ka, waxay ka maqan yihiin gudaha dalka, gaar ahaana Madaxweyne Deni ayaa safar ugu maqan Imaaraatka Carabta iyo Kenya, iyadoo ay warar kala duwan kasoo baxayaan ujeedada safarkan.
Axmed Madoobe ayaa saldhigtay magaalada Nairobi ee Kenya, isagoo mudo ka badan 16 bilood maamulkiisa uusan laheyn xubnaha golaha Wasiiradda oo laga sugayo, ayna shaqada sii wadaan Kusimayaasha kala duwan, wuxuuna la sugayaa arrimaha doorashooyinka Federaalka.
Mmohad ali says:
Dani iyo madobe waxay xarago moodeen
Cawinta dal shisheeye oo aay xataa
Aay garanlayihiin dalkiina ushaqaaya
Diinteena islaamka waxay noshagtay
Inayjiraan kuwo aqliga usaaxiib ah
Kuwaas waa kuwa allaah kabaqo oo
Sameeyo wixii fiican allahna waxaa uu
Abalkoda kadhigaa wanag iyo inay fahaman
Mesha guushu aaytaalo kenya waa dal bahan oo
Africada madow kuyaalo waana dal sabool ah
Inaad kabaqaad unoqoto aqli guurka ku
Dhacay madoobe iyo somaldu ba wayaan immarates waa waxay haystaan shidal laakin isha muuqato mahan kuwo
Siijirido because way aay kibreen
Hadaba somaliy dalkiina iimansada
Wax walaac ah ma jiraan, waa Emirates iyo Kenya Karaarkoodii baa ku rakiba. Waa arrin qof walba fahmi karo. Axmed Kenyatta waxaa ka dhex guuxaya waa siyaasadda iyo Damaca Dowladda Kenya, sidoo Kale Deni waxaa ka dhex guuxaya Siyaasadda iyo Damaca Dowladda Emirates.
Marka dadka caadiga ayaa fahansan ineysan aheyn Axmed Kenyatta iyo Deni, balse waa Niman u adeega Danaha Dowladaha Kenya iyo Emirates. Waxaana maalinba meel u jahaynaya waa dowladahaas,ma ahan Nimanka shaqeynaya Danta ummadda Soomaaliyeed,waa shisheeye kalkaal aad u liita feker ahaan,Damiir ahaan,Soomaalinimo iyo Islaamnimo.